Turkiga oo saldhigiisa milatari ee gudaha Soomaaliya furi doona bartamaha bisha April ee sanadkan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaTurkiga oo saldhigiisa milatari ee gudaha Soomaaliya furi doona bartamaha bisha April ee sanadkan
Turkiga oo saldhigiisa milatari ee gudaha Soomaaliya furi doona bartamaha bisha April ee sanadkan
March 17, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Saldhiga milatari ee Turkiga ee gudaha Muqdisho. [Xigashada Sawirka: Radio Muqdisho]
Garoowe-(Puntland Mirror) Turkiga ayaa rajaynaya in uu furo saldhigiisa milatari ee gudaha Soomaaliya bartamaha bisha April ee sanadkan, sida warbaahinta Turkigu ay sheegeen.
Sida uu ku waramay wargeyska Turkiga ee Yeni Safak, ciidamada Turkiga ayaa ciidamada Soomaaliya iyo ciidamo kale oo ka imaanaya wadamo kale oo Afrikaan ah ku tababari doona saldhiga, kaasoo laga dhisayay meel u dhow garoonka diyaaradaha caasimada Soomaaliya ee Muqdisho tan iyo bishii Maarso ee sanadkii 2015-kii.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo taliyaha guud ee ciidamada Janaraal Hulusi Akar ayaa la filayaa in ay ka qaybgalaan munaasabada rasmiga ah ee furitaanka, taasoo lagu wado in ay dhacdo bartamaha bisha April ee sanadkan 2017-ka, sida ilo-wareedyadu sheegeen.
Kharashka dhismaha ku baxay ayaa lagu waramayaa in uu kor u dhaafayo $50 milyan, saldhiga ayaa ku fadhiya dhul dhan 400 hectar waxaana kuyaala ilaa saddex iskuulo milatari ah, guryo deegaan ahiyo bakhaaro.
Asbuucii lasoo dhaafay, wasirka gaashaandhiga Soomaaliya ee shaqada ka tagaya Cabdiqaadir Shiikh Cali Diini oo ay la socdeen saraakiil milatari oo Turki ah ayaa kormeer ku tagay saldhiga oo kuyaala gudaha Muqdisho.
Saldhiga ayaa noqon doona saldhiga kowaad ee milatari ee ugu weyn oo Turkigu ku leeyahay wadan ajnabi ah.
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Caasho Ilyaas Aadan, oo ahayd gabar dhalinyaro ah, taasoo la waayay Axadii, ayaa saakay oo Isniin ah meydkeeda laga helay banaanka gurigeeda oo kuyaala magaalada Gaalkacyo, sida ay sheegeen qoyskeeda iyo booliiska. Meydkeeda [...]